Puntiland oo cadeysay in ciidamo ay ku taagerayaan Axmed Madoobe ay ku diyaarsanyihiin garoomada Maamulkaasi | warsugansomaliya.wordpress.com
Cabdi Naasir Bedel Qalaf oo ah Isku duwaha wasaarada war-faafinta maamulka Puntiland ayaa waxa uu sheegay in maamulka Puntiland uu diyaar u yahay in uu ku taageero meleteri iyo dhaqaalaba Hogaamiye Axmed Madoobe si ay gacan uga geestaan sii heysashadiisa Kismaayo.
“Puntiland Waxaa ay ku taageeree maamulka Jubaland ee xaqa ah hanti iyo ciidan. Ciidankeennu waxa uu ku diyaarsanyahay garoomada diyaaradaha. Waxa u dhiman waa in la daabulo oo kali ah”, Cabdi Naasir Bedel Qalaf ayaa intaa raaciyay.
Sarkaalkaan kamid ah wasaarada war-faafiunta Puntiland ayaa waxaa kale oo uu sheegay in maamulka Puntiland iyo maamulka Axmed madoobe aysan aqoonsi uga baahneyn dowlada federal-ka Soomaaliya oo uu sheegay in labadaasi maamul oo ah kuwa walaala ah aysan dowladu raalli ka aheyn.
“Maamulada Puntiland iyo Jubaland aqoonsi ugama baahna dowlada Xassan Sheekh Maxamuud. Cadaw ayeey ku tahay in ay sii jiraan ayaa dhibeysa hasa yeeshee waa sii jirayaan dhibna lama kulmi doonaan” sarkaalkaan ayaa cod dheer ku yiri.
Si kastaba, Puntiland ayaa waxa ay horay u taageeri jirtay kooxda Axmed Madoobe, hasa yeeshee waa markii ugu horeysay ee ay cadeyso in ay ciidamo u diyaarisay si ay Kismaayo uga dagaalamaan arintaas oo hadii ay dhacdo noqoneysa mid xaqiijisa oo shakiga ka saarta hadafka Puntilad ee masiirka Soomaaliya.
← Wadan Gaajo ah oo Midawga Yurub ku biiray & Shacabka degan oo farxad iyo Dabaaldegyo bilaabay (Daawo Muuqaal ahaan)
Gudoomiyaha bankiga dhexe ee Soomaaliya oo si kulul uga hadlay eedeymaha loo soo jeediyay →